Wararka - Arenti wuxuu u Magacaabay Maaraynta ITM Maareeyaha Deegaanka ee Vietnam
Arenti wuxuu u Magacaabay Maaraynta ITM Maareeyaha Deegaanka ee Vietnam
Hangzhou - Jan. 1, 2021 - Arenti, oo ah hormuudka bixiyaha kaameeraha amniga guriga ee IoT smart, ayaa maanta ku dhawaaqay inay xoojineyso joogitaankeeda Vietnam oo leh lamaane cusub ITM Management oo ah qaybiyaha noocyadiisa kala duwan ee taxanaha.
Shuraakada cusubi waxay xoojineysaa ballanqaadkii Arenti ee kanaalkeeda tafaariiqda ee Vietnam wuxuuna ku dhisnaa joogitaankiisii ​​ugu horreeyay ee suuqan. Qaybinta iyada oo loo marayo Maaraynta ITM waxay sii xoojin doontaa Arenti inay si fiican u sahamiso suuqyada Koonfur -bari Aasiya.
Maaraynta ITM waa hoggaamiyeyaasha Vietnam ee hormuudka u ah qaybinta isgaarsiinta iyo xalka ICT. Thu, Maareeyaha Horumarinta Ganacsiga ee ITM, ayaa yiri, “Kaamirooyinka amniga guriga ee caqliga leh ayaa aad muhiim ugu noqday sannadihii la soo dhaafay. Sannadka 2020, gaar ahaan, ganacsigan aad buu u ballaariyay COVID-19 iyo dalabka baaxadda leh ee la socda ee ka imanaya qoysaska iyo ganacsiyada yaryar si loo helo xalka amniga guriga oo la awoodi karo si loogu xiro loona ilaaliyo kuwa ay jecel yihiin miisaaniyad xaddidan. Si loo daboolo baahida sii kordheysa oo aan u sii wadno inaan u soo bandhigno iibiyeyaashayaga khibrad hal-dukaan ah, waxaan ku darnay Arenti alaabada taxanaha oo dhan faylalkayaga dhammaadkii sanadkii hore. Waxaa si rasmi ah naloogu magacaabay qaybiyaha tooska ah iyo soo dejiyaha Arenti kamaradaha taxanaha oo dhan tan iyo 1 -dii Janaayo, 2021. Aad ayaan ugu faraxsanahay iskaashiga aan la leenahay ciyaartoygan caalamiga ah waxaanan kalsooni buuxda ku qabnaa xalalka aan wada -bixin karno Arenti. ”
Siro Huang, oo ah Agaasimaha BD ee Arenti, ayaa yiri, “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Maaraynta ITM ay noqon doonto Qaybiyaha Arenti ee taxanaheena oo dhan xalka kamaradda amniga guriga ee caqliga leh. Marka la eego heerka cusub ee dhaqaalaha adduunka, Maamulka ITM iyo Arenti waxay rumeysan yihiin in kaamirooyinka amniga guriga ee caqliga leh ee Iot ay noqon doonaan suuq koror degdeg ah. Waxaan aaminsanahay in wadashaqeyntani ay u keeni doonto qiimaha ugu sarreeya ITM iyo Arenti iyo dhammaan macaamiisheena. ”
Iskaashiga tooska ah ee Maamulka ITM waxaa la hirgelin doonaa laga bilaabo Janaayo 1, 2021.
Teknolojiyadda Arenti waa koox hormuud u ah AIoT oo diiradda saareysa sidii loo keeni lahaa alaabada amniga guriga ee ka nabdoon, fudud, ka caqli badan dadka isticmaala adduunka. Wuxuu ku dhashay Nederland, Arenti waxaa aasaasay koox khubaro ah oo ka kala socda dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin shirkadda amniga adduunka ugu weyn, shirkadda 500 ee maalka ah ee adduunka, iyo madal guriga ugu horreeya oo caqli badan. Kooxda asaasiga ah ee Arenti waxay leeyihiin waayo -aragnimo ka badan 30 sano AIoT, amniga & warshadaha guriga caqliga leh.www.arenti.com.
Ku saabsan Maaraynta ITM
Waxaa laga aasaasay HCMC, Vietnam, 2009, Maaraynta IT waxay siisaa xirfadlayaal:
Adeegyada IT ee dayactirka, Rakibaadda iyo soo iibsiga
PC Computer & Laptop
Server, Shabakad, Nidaam
Iyada oo leh nidaam macquul ah oo gudaha ah oo si joogto ah kor loogu qaadayo teknolojiyaddii ugu dambeysay, waxaan caymineynaa ballanqaad tayo sare leh oo la xaqiijiyay oo ku jira shaqadeenna hadda in ka badan 10 sano.
Shaqaalaheena caalamiga ah waxay qiimeeyaan fahamka qotada dheer ee loolankaaga si ay ula jaanqaadaan kartidayada xaaladdaada oo ay u siiyaan xalka loo habeeyay oo runtii ku habboon baahiyahaaga.
Wax -ku -oolnimada, wax -ku -oolnimada iyo falcelinta ayaa ah qiyamka dhistay guusheenna oo hadda noo oggolaanaya inaan sii wadno kobcinta Vietnam iyo wixii ka dambeeya. Laga soo bilaabo laba xafiis, ITM HCMC iyo ITM HANOI, Maaraynta ITM waxay u adeegtaa ku dhawaad ​​boqollaal iibiyeyaal qaybta ICT.
Waqtiga dhejinta: 20/03/21